Sidii aad shaqo ku heli lahayd awgeed, ma u baahan tahay taageero dheeraad ah? Haddii aad isticmaasho adeegga la magac-baxay Abaabulid iyo is-qabadsiin, waxaad heli doonta taageerada aad u baahan tahay. Adiga ayaa dooranaya Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad ka doonayso taageerada, waxaana lagu magacaabi doonaa qof hage ah oo ku caawino. Hadafka waxaa weeyaan in sida ugu dhaqsida badan aad shaqo ama waxbarasho hesho.
Baadigoobo Shirkadda adeeg-bixiya ah
Sidatan ayaa loo xusha
Abaabulid iyo is-qabadsiin waxaad ka xulanaysaa Shirkadda adeeg-bixiya ah. Xulashadaada ku salay baahidaada. (Af-iswiidish oo keliya)
Adeegga Abaabulid iyo is-qabadsiin waxaa loogu talagalay qofka adigoo kale ah oo shaqayn kara, laakiin u baahan taageero dheeraad sidii u shaqo ama waxbarasho ku heli lahaa darteed. Iyadoo la isticmaalayo hal agabbare ka hawlgala Shirkadda adeeg-bixiyeyaasha Xafiiska Shaqada, waxaad heleysaa dhaqdhaqaaq gaar ahaan baahidaada loola qabsiiyay, taasoo ka caawini doonto sidii ugu dhaqsi badan hadafkaaga ku gaari lahayd: shaqo ama waxbarasho. Waxay noqon kartaa xiriir la yeelashada shaqo-bixiyaha, taageerada shaqo lagu raadsado laguna codsado, warbixin xiriir la leh fursadaha waxbarashada iyo hagid. Haddii aad dalka Iswiidan ku cusub tahay waxaad ka qaybgeli kartaa barashada luqadda iswiidishka ee soo-gaaleetiga loogu talagalay (sfi).
Waxaad kaloo heli karta taageero ku salaysan tababar shaqo, qiimaynta karti-xirfadeedka ama ansixinta waa haddii aan arrinta ku qiimayno in ay jirto sabab. Ugu yaraan hal jeer afar iyo tobbankii maalmood waxaad agabbarehaaga la yeelan doontaa kulan looga arrinsado horumarka.
Haddii aadan garanayn af-iswiidish waxaa lagu ballaminayaa qof turjubaan ah.
Imminka waxaa adeegyada noocaan ah laga helaa 32 degmo. Haddii aadan degganayn mid kamid ah degmooyinka, waxaa lagugu biirin karaa adeegga Stöd och matchning, Taageero iyo is-qabadsiin.
Waa inaad degan tahay mid kamid ah degmooyinka hoos ku xusan
Go`aanka qiimaynta haddii adeegga Abaabulid iyo is-qabadsiin kugu habboon yahay iyo in kale anaga iska leh. Sidatan ayaa qiimaynta ugu dhaqaaqna (af-iswiidish oo keliya).
Ugu yaraan lix bilood ayaa ka qaybgeli doona, kaddib waxaan qiimayn doonaa natiijada. Haddii loo baahdo waxaa dhici karto in lix bilood kale aad ka qaybgasho, isku-darkii waa 12 bilood.
Adiga ayaa awoodo xulashada Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad doonayso inaad isticmaasho. Halkaan weebka, ayaa ka heleysaa Shirkadda adeeg-bixiya ah ee degmadaada ka hawlgasho. Waxaad kaloo heleysaa warbixin ku saabsan qaabka ay u hawlgalaan iyo luqadda iyo aqoonta laamaha xirfadaha.
Markii ballan-qabsashada kaddib aad noo la kulmayso, waa inaad na wargelisaa Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad dooratay. Waxaan kaloo kaaga baahan nahay lambarka loo yaqaanno [KA-numret], kaasoo ku qoran hoosta magaca Shirkadda adeeg-bixiya ah.
Qof agabbare ka ah Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad dooratay, ayaa kula soo xiriiri doono, kaasoo kaddib kulanka ugu horeeyo kula yeelan doono. Kaddib waxaad wadajir u dejin doontaa qorshe horumareed ee adiga ku gaar ah, taasoo ujeedada tahay sidii ugu dhaqsi badan ee aad shaqo ama waxbarasho ku bilaabi lahayd.
Haddii aadan dooran karin Shirkadda adeeg-bixiya ah, waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaanno mid aan la dooran. Xaaladdaas waxaad taageero ka heli doontaa Shirkadda adeeg-bixiya ah ee ka hawlgasha goobta aqalkaaga ugu dhow.
Haddii aadan ku qanacsanayn caawinaadda lagu siiyay, waxaad xaq u leedahay inaad Shirkadda adeeg-bixiya ah iska bedesho. Xaaladas beddeladda darteed noola soo xiriir.
Markii aad ka qaybgalayso adeegaan waxaa lagu siin doonaa taageero-dhaqaaleed, sida gunnada dhaqdhaqaaqa (aktivitetstöd), gunnada ka qaybgaleyaasha qorshaha shaqada (utvecklingsersättning) ama gunnada sal-dhigidda (etableringsersättning).
Markii aad ka qaybgalayso Abaabulid iyo is-qabadsiin, waxaa ku khuseeya caymis loo yaqaanno (personskade- och grupplivförsäkringar). Haddii aad ka qaybgalayso adigoo meel fog ku sugan, waxaa xaaladdaas fiican inaad xitaa leedahay caymiska shilalka (olycksfallsförsäkring) oo adiga ku gaar ah, maxaayeelay lama hubo in caymisyada dowliga ay ku khuseeyaan markii aad ka qaybgalayso adigoo meel fog ku sugan.
Halkaan ayaa ka aqrisan kartaa jawaabta su`aalaha xiriirka la leh Abaabulid iyo is-qabadsiin.